Nankany Strasbourg By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Nankany Strasbourg By Train
(Last Nohavaozina: 17/03/2020)
Rehefa mitsidika ny mpandeha milaza Frantsa, ny ankamaroan'ny olona avy hatrany mieritreritra Paris. Na izany aza, Frantsa renivohitra Tsy ilay tanàna ihany no mendrika ny fitsidihana eto amin'ity firenena mahafinaritra, Nankany Strasbourg no AMIN'NY vaovao. Maro toeran-kafa dia ho mendrika ny fankasitrahana rehetra zava tsara tarehy ary ny traikefa azon'izy ireo atolotra.
Strasbourg dia iray amin'ireo tanàna fa afaka mankasitraka bebe kokoa, na noho ny hatsarany sy ny habetsahan'ny zavatra atao any. Nandeha lamasinina ho any Strasbourg avy amin'ny tanàna lehibe Eoropa handeha haka ny fofonaina izy. Ndeha isika handinika ny fomba mandeha ho izany mahafinaritra toerana ary izay afaka mahita sy manao any:
Rehefa nankany Strasbourg mamangy ny Strasbourg Cathedral
Katedraly avy amin'ny vanim-potoana Moyen Âge dia ny hilaza, mahatalanjona sy mahagaga ny hijery fotsiny. ary Strasbourg katedraly mijoro lava teo aminy - ara-bakiteny, tahaka ny taloha ho trano avo indrindra eto an-tany mandra- 1874! Faritra sasany azy io daty hatrany indray toy ny 1100, izay tena mandra-pahoviana fanekena ho manan-tantara ity rafitra efa mijoro. Na misafidy ny hijery ny ao anatiny na hikambana amin'ny fitandremana ny lafin-trano ivelany, ianao handeha ho gaga.
Haka sary La Petite Frantsa
Rehefa niroso tao La Petite Frantsa mahatsapa efa ho toy ny miverina ara-potoana. Amin'ny quaint mainty sy fotsy tapany-timbered stacked rafitra ao amin'ny distrika izay nampiasaina mba isan 'mpandranto isan-karazany, rarivato eny an-dalambe, sy ny nentim-paharazana trano fisakafoanana, izany toerana tsy maintsy hiaina. maka sary ary sary an-tsaina ny tenanao ao amin'ny razana fahiny.
Marseilles ho Strasbourg Lamasinina
Antwerp ho any Strasbourg Lamasinina
Lyon any Strasbourg Lamasinina
Manaram-po Ao an-toerana Cuisine
Fa sakafo mpizaha tany, misy Fifaliana gastronomical manokana mba ho sampled rehefa mizotra any Strasbourg: Alsatian sakafo, ary miavaka divay ary labiera. Strasbourg manjaka amin'ny faritra Alsace, izay misy divay ny ankamaroany varietal, ary ny lehibe dia roa hanandrana Gewürtztraminer sy Riesling. Roa farany voaendy amin'ny lapoely-besisika na Choucroute garnie, fanta-daza Alsatian Classics, ary faly ny lanilaniny.
Cologne any Strasbourg Lamasinina
Lille ho any Strasbourg Lamasinina
Zurich any Strasbourg Lamasinina
Metz ho any Strasbourg Lamasinina
Raiso sambo Trip Around Strasbourg
Iray hafa tsara dia tsara trandrahana fomba Strasbourg dia amin'ny alalan'ny sambo mitaingina. Tena tsara tarehy vintana izay hijery tsara tao an-tanàna ny sasany ny tsara indrindra hitan'ny olona, ​​ary mianatra momba ny tantara tamin'izany andro izany. Misy mitaingina sambo be dia be ny safidy azo isafidianana, ary mety hahazo hevitra roa toy ny izay hidirana mba hitsidika manaraka.
Strasbourg no manana ny faharoa lehibe indrindra gara any Frantsa, taorian'ny Paris. Fitoriana izany lamasinina dia somary mivantana, ary manana ny safidy ny mandray ny fiaran-dalamby haingam-pandeha TGV (fiaran-dalamby haingam-pandeha.) Mety hitondra anareo avy any Paris ho any Strasbourg in ihany 2 ora sy 20 minitra, raha tokony ho ny mahazatra 4 ora ny fiara.
Izany dia midika ihany koa fa ny fotoana Travel avy amin'ny tanàna Eoropeana lehibe hafa ihany koa be fohy. Raha toa ianao nankany Strasbourg avy Soisa, Belzika, Pays-Bas, Alemaina, sy ireo firenena Eoropeana sy tanàna, dia afaka mahazo any Strasbourg mora foana sy haingana. Mitady alina fifandraisana raha ianao amin'ny Nihamafy teti-bola satria ireo tapakila matetika mora kokoa.
Vonona ny hanana ny fotoana eo amin'ny fiainanao manadihady ny tanànan'i Strasbourg mahafatifaty? Boky ny saran-dalana ankehitriny, ary finaritra na ny dia sy ny toerana itodiana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)